စိတ် – The Only Way To Go!
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိရှေ့မှာ အဆင်မပြေမှုတစ်ခုခုအား မြင်ရ၊ကြားရ၊တွေ့ရသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ သည် စိတ်တို ဒေါသထွက်ရ၏။ အခဲမကြေဖြစ်ရ၏။ လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်ရ၏။ အပြစ်တင်လိုစိတ်များ ဖြစ်ရ၏။ ရန်ပြန်မူလိုစိတ်များ သာ တဖွားဖွား စိတ်အိမ်အတွင်း၌ မိမိကိုယ်တိုင် သတိမူမိဘဲ ဖြစ်ရ၏။ ထိုသို့သော အချိန်များ၌ မိမိစိတ်တွင်မူ အတွေးစအား သူ့နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုလျှင် ဆိုတဲ့စိတ်ဖြင့် မပြောင်းလဲနိုင်ပါမူ …. ထိုစိတ်သည် မိမိအား ပူလောင်မှုကိုသာ ဖြစ်စေ၏။ ဤနည်းဖြင့် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း ထွက်ပေါ်မလာနိုင်။ သူတပါးကိုလည်း ကူညီမှုမပေးနိုင်။ မိမိ၏ အားထုတ်မှုသည် လမ်းမှားဖြင့်သာ အဆုံးသတ်ရ၏။ လူတိုင်း၌ သူ့အခက်အခဲနှင့်သူ ရှိကြ၏ ။ မည်သူမျှ ခက်ခဲ့ခြင်း အရှက်ကွဲခြင်းကို အလိုမရှိ။ ဥပမာ .. ဘတ်စ်ကားပေါ်၌ ခရီးသည်တစ်ယောက်မှ … More ကိုယ်သာ သူ့နေရာမှာသာဆိုရင်
Leaveacomment ကိုယ်သာ သူ့နေရာမှာသာဆိုရင်
လေပြေက အေးအေးလေး အလာလမ်းက ညင်ညင်ကလေး ရင်တွင်းဗဟိုချက်သို့ ခဏ နားပြီးတဲ့အခိုက် အပြန်လမ်းအတွက် လေပြေက နွေးသွားတယ် ဒီလိုနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် မရေတွက်နိုင်အောင် သူလာတယ် သူပြန်တယ် …… အဲ့ဒီ ဝေါဟာရ နှစ်ခုကြားမှာ .. လူးလွန့်နေတဲ့ စိတ်ကလေးက တစစ အနည်ထိုင်လာတယ် တဖြည်းဖြည်း ကြည်လင်လာတယ် တရေးရေးနဲ့ အေးချမ်းစပြုလာတယ် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို စတင်တွေ့လာတယ် ဒီလိုနဲ့ အတွင်းစိတ်ရဲ့ အသိက ဘာက ဘာဆိုတာ သိလာတယ် အဲ့ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို သွားတဲ့ အတိုဆုံးလမ်းပဲ .. ။ ဘာနေ
1 Comment အတိုဆုံးလမ်း
နိဂုံးသို့ … လူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာသည် လူတစ်ယောက် သေသွားသည် ။ထိုသို့ သေသွားသော အဆုံးနိဂုံးသို့ လမ်းကြောင်းကို မိမိရဲ့ အသိဉာဏ်အတွင်းမှာ နားလည်သလောက် ရှင်းပြ ဆွေးနွေးပြခြင်းသာပါ ။ ဓမ္မ ဓမ္မ ဆိုသည်မှာ .. တရား .. .. ဘယ်လိုတရားလဲဆိုရင် အမှန်တရား …။ ဘယ်လိုမှန်တာကို ဆိုလိုသလဲ ဆိုရင်ဖြင့် . လောကီ ရော လောကုတ္တရာရော နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဖြင့် .. စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် တွက်ချက် စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ တရားပင်ဖြစ်သည် ။ အဲ့ဒီလို စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်း လုံးဝ မှန်ကန်နေမှ ဓမ္မ လို့ ခေါ်ဆိုပါလိမ့်မည် ။ လောကီ ဆိုသည်မှာ.. လူမှုရေးလောကထဲက သားရေး သမီးရေး စီးပွားရေး လူမှုရေးတွေကို … More နိဂုံးသို့ …
Leaveacomment နိဂုံးသို့ …
အမှိုက်မကြိုက်သူ …………………………….. လူတိုင်း နံနံစော်စော် အမှိုက်သရိုက်အနံ့ကို မကြိုက်ကြပေ ။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း … အမှိုက်နံ့ကို မကြိုက်၍ အမှိုက်ပုံထဲ မဆင်းခြင်း ဖြစ်လေသည်.. ။ ထိုသို့ နေနိုင်ဖို့မူကား အမှိုက်ကို အမှိုက်မှန်းသိဖို့သာ လိုပေသည် ။ အမှိုက်ကို အမှိုက်မှန်းမသိသော သူများကား အမှိုက်နံ့များဖြင့်သာ .. ရှူရမှန်းမသိ ရှူမိကြလေသည် ။ ထိုသူတို့သည် ထို့သို့ ရှူရခြင်းကိုမူ မနှစ်သက်ကြ သို့ပေမဲ့ အမှိုက်ကန် အမှိုက်ပုံများကိုသာ ဝင်ဝင်ခွေ့တတ်ကြလေသည် ။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ထို့အတူပင်ဖြစ်ပေသည် ။ အမှိုက်နှင့်တူသော စရိုက်မကောင်းသော နယ်ပယ်ထဲသို့ မရောက်ရလေအောင် သတိထားပြီး ရှောင်းရှားဖို့ပင်ဖြစ်ပေသည် ။ ( အက်ဆေး တို .. ) ဘာနေ 1/19/2013
Leaveacomment အမှိုက်မကြိုက်သူ
အာရုံများ စေစားရာဖြစ်သော လူ့သဘာဝမှာ .. အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော စိတ်အစဉ်တန်းကို .. ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ … ရေဆုံး ကုန်းဆုံးအထိ လိုက်တွေးတတ်လေသည် ။ မနက်သည် ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ မနေ့သည် ၊ ဟိုး အတိတ်တွေသည် စသဖြင့် မလိုအပ်တဲ့ စိအာရုံတွေပေါ်မှာ မောဟ ဟုခေါ်သော ကိုယ်ဘာတွေးလို့ တွေးနေမှန်းမသိတဲ့ စိတ်များဖြင့် ကုန်ဆုံးခဲ့လေသည် ။ ထိုအရာတွေသည်ပင် ယခု ကျွန်ုပ်တို့တတွေ ရောက်ရှိနေသာ နေရာ၏ ၊ ရောက်ရှိနေသော စိတ်နေစိတ်ထား၏ မြစ်ဖျားခံရာ ဇစ်မြစ်ဖြစ်လေသည် ။ မိမိတို့ဘဝတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတိုင်း ကြီးမြတ်ချင်သည် ။ ကြီးပွားချမ်းသာလိုကြသည် ။ ဇိမ်ခံပစ္စည်း မြောက်များစွာဖြင့် ဇိမ်ခံပြီး နေချင်ကြသည် ။ … More ဖြတ်တောက်ခြင်း
2 Comments ဖြတ်တောက်ခြင်း
တနေ့တာကို တနေ့တာလို့ မြင်တာထက် ဒါဟာလည်း ကိုယ့်ဘဝပါပဲလို့ မြင်လိုက်တာက မိမိဘဝမှာ တန်ဖိုးထားဖို့ သတိလေး ပို ထင်ရှားသွားစေပါတယ် ….။ ကျွန်ုပ်တို့တတွေ အားလုံး နေ့တိုင်း … နေရေး ၊ စားရေးတွေအတွက် ဝတ်မပျက်အောင် နေထိုင်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ပိုင်ဘဝအသီးသီးတွေကို သတိတရား ထားပြီးနေဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ .. အရှိတရားတွေကိုသာ သတိထားပြီး မြင်တတ် နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ် .. ။ သတိတရားနဲ့ ပြည့်စုံဖို့မှာ မရှိတဲ့အရာကို မကြည့်ပဲ ရှိတဲ့အရာကိုသာ ကြည့်မှ .. သိသာထင်ရှား ခရီး အပေါက်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. ။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ တနေ့ချင်း … လူ့တဘဝထဲမှာပင်ကိုပဲ ကံကံရဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှု … More မြင်နိုင်ကြစေ..
Leaveacomment မြင်နိုင်ကြစေ..